Farmaajo oo dhambaal u diray Madaxweynaha dib loo doortay ee dalka Jabuuti - Awdinle Online
Maxadweynaha mudo xileedkiisa uu dhamaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyo ah u diray Madaxweynaha dalka àan walaalaha nahay Jabuuti oo markale dib loo doortay.
” Waa guul xoojinaysa horumarka iyo xasilloonida gobolka,Waxaan ku kalsoonahay in aad dardargelin doonto horumarka iyo wax wada qabsiga dalalka gobolka” ayaa lagu yiri warqoraal ah oo lagu dabacay twitter Maxadweynaha.
Qaar kamid ah xubnaha Midowga Musharixiinta sida, Sheekh Shariif iyo Cabdiraxman Cabdishakuur ayaa waxaa ay dhankooda u hambalyeeyeen Madaxweynaha dib loo doortay ee dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Dowladda Jabuuti ayaa waxaa ay kamid tahay dowladaha taageera Soomaaliya, waxaana inta badan degmooyinka Gobolka Hiiraan ka jooga Ciidamo ku howlgalla Magaca AMISOM.
Previous articleAskari ka tirsanaa Nabadsugida Jubbaland oo qarax lagu dilay
Next articleNatiijada baaritaanka dilkii Guddoomiyihii degmada Hodan oo loo gudbiyay Xeer ilaalinta Qaranka.